トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Intsingiselo yemeko HIV kunye nendawo ngasemva ukubhula "amandla", iqabane iimvakalelo?
umsebenzi abaxeli-mathamsanqa kwindlela
uguqulelo ubunzima get ziphicothwa 3500 yen Simahla amandla "amandla" ikhadi isikhundla umva kunye uphawu lwe ∞ ukuya kakuhle na ingonyama ukumkani izilo indlela bayavuka stroking zithathwa. Ngokuqhelekileyo umfanekiso oliduna athi "amandla", kodwa kulula ukucinga amadoda anamandla ngathi version bhula soMhlekazi kunye namatanki, ikhadi ngamandla olu guqulelo ubunzima seluzotyiwe mfazi ngobubele.
So angathanda uqaphele kukuthi, "ububele" oko sesona sixhobo sikhulu, ezinje ukuba ungamandla. Nokuba ububele yokumkani amarhamncwa ingonyama kwakhona igama ngesandla, ngenxa yokuba kukho isisa, amabhinqa libonisa ukuba kukho kwisiqhoboshi azithembe.
amandla ikhadi lo kuthethwa ngantoni na ubungakanani nobuchule, iyoba namandla, ubulumko, inkalipho, kuba iqhutywa ngamandla, kunokuba nje amandla, ezifana isingqi nkqu ekuthiwa naye, basondela amandla uquka iqela kuya kubakho.
amandla welinye icala iimvakalelo
amandla ikhadi yobume ezintle Kucingelwa ukuba kuthetha kwaphuma kunye nesikhundla entle kunokuba phambili ngokuqiniseka, ukuphucula imeko, echumayo ngakumbi imele zingafumaneka iziphumo ngaphezulu. Kwimeko babini Ndicinga abantu, enye Ndicinga ukuba kubalulekile njengoko nzima ukutshintsha ngaphezu kwayo nantoni na ulwalamano kunye nawe. Hayi nam ukumelwa ngokuvakalayo, kodwa ekucingelwa ubukho bakho kunye Inomtsalane kakhulu, ithemba kwaye ufuna ukuba bazakhele oku kuhleli ulwalamano lwabo.
njengokuba kwakukho ukuba abantu bayathanda ukumanzisa ulwalamano lwabo, Ukuba usiya ngokungxama nabantu ababini, ukuze nabo babe koyiswe nto, ngoko uya kuba abantu ngakumbi ababini nithanda abo strong , umtshato uya kuqalisa umdlalo. Kwimeko abantu uthando ezingabuyekezekiyo siyaqonda ukuba wena ubukho ebalulekileyo. Yinto oluthembekileyo kakhulu, kodwa ngenxa yokuba ndiziva kwakhona Yenza ingafikeleleki kwelinye icala, ungafuna ukuzama wadibana noFrank ngokwengqiqo umhlobo. Ukuba
amandla ikhadi yemeko umva ithathwa ukuba ibhekisele kuza umva imela imeko apho ngokugqith 'kwaye narcissistic ukuba udale imeko embi. Kwimeko babini Ndicinga abantu, elinye iqela okanye kube nzima ukuba iimvakalelo ungqingqwa, ngenxa yokuba urhulumente ukuba ulahlekelwe ukuzithemba, kunzima kungcono uliyeke linjalo kangako ngaphandle bumdaka.
unazo naziphi na iimvakalelo kuwe, kodwa ayikwazi ngayo kakuhle, ngenxa yokuba bavalele uzive ukhathazekile yaye ndiza babukele unkabi. Kwimeko abantu uthando ezingabuyekezekiyo limela ukuba ayikho kwimo uthando, ngekhe ndibone nje isipho okhethekileyo kuwe. Okokuqala, siza kulindela na elinye iqela aphinde ezabo.